VIETNAMESE भाषा भियतनामी र विदेशीहरूका लागि - सेक्सन २ - भियतनाम अध्ययनको पवित्र भूमि
भियतनामी वर्णमाला प्रणाली
त्यहाँ छन् १29 अक्षर मा भियतनामी वर्णमाला प्रणाली जुन समावेश छ १२ स्वरहरू र १ cons व्यंजन। तल सूची हेर्नुहोस्:
भियतनामी वर्णमाला (स्रोत: लाक भियतनाम कम्प्युटिंग कर्पोरेशन)
भियतनामी स्वर (स्रोत: IRD नयाँ टेक)
माथि उल्लेख गरेझैं त्यहाँ छन् १२ स्वरहरू भियतनामी वर्णमाला प्रणालीमा। तिनीहरू समावेश छन्:
कसरी यी स्वरहरू सर्वनाम गर्ने भनेर तलको अनुसरण गर्नुहोस्।
भियतनामी स्वर उच्चारण (स्रोत: लाक भियतनाम कम्प्युटिंग कर्पोरेशन)
अगाडि, केन्द्रीय, र कम स्वर (i, ê, e, ư, â, ơ, ă, a) असमान छन्, जबकि पछाडि स्वर (u, ô, o) गोलाकार छन्। को स्वर â [ə] र ă [a] धेरै छोटो, अन्य स्वर भन्दा धेरै छोटो भनिन्छ। यसैले, ơ र â मूल रूपमा त्यो बाहेक उस्तै उच्चारण गरीन्छ ơ [əː] लामो छ â [ə] छोटो छ - उही तल्लो स्वरमा लागु हुन्छa[aː] र छोटो ă [a]।
डिप्थोongsस र ट्रिपथongs्गहरू
साथै एकल स्वर (वा मोनोफथो .स), भियतनामीसँग छ डिप्थongs्ग्स र triphthongs। यो डिप्थongs्ग्स एक मुख्य स्वर कम्पोनेन्ट समावेश हुन्छ त्यसपछि छोटो सेमिभेल अफग्लाइड पछि या त उच्च फ्रन्ट स्थितिमा [ɪ], एक उच्च फिर्ता स्थिति [ʊ], वा केन्द्रीय स्थिति [ə]। तल तालिका हेर्नुहोस्:
भियतनामी डिप्थोongs्ग्स, ट्रिफथोंग (स्रोत: ल्याक भियतनाम कम्प्युटिंग कर्पोरेशन)
केन्द्रित डिप्थongs्ग्स केवल तीन उच्च स्वरको साथ गठन गरिएको छ (i, ư, u) मुख्य स्वरको रूपमा। तिनीहरू सामान्य रूपमा हिज्जे हुन्छन् ia, a, ua जब ती शब्द समाप्त हुन्छ र हिज्जे हुन्छ iê, ươ, uôक्रमशः, जब तिनीहरू एक व्यञ्जनले पछ्याउँछन्। उच्च अफग्लाइड्समा प्रतिबन्धहरू पनि छन्: उच्च फ्रन्ट अफग्लाइड अगाडि स्वर पछि हुन सक्दैन (i, ê, e) न्यूक्लियस र उच्च ब्याक अफग्लाइड पछाडि स्वर पछि हुन सक्दैन (u, ô, o) केन्द्रक।
ओर्थोग्राफी र उच्चारण बीचको पत्राचार जटिल छ। उदाहरण को लागी, अफग्लाइड [ɪ] सामान्यतया i को रूपमा लिखित हुन्छ तथापि, यो पनि प्रतिनिधित्व हुन सक्छ y। थप रूपमा, मा डिप्थongs्ग्स [aɪ] र [aːɪ] अक्षरहरू y र i मुख्य स्वरको उच्चारणलाई पनि संकेत गर्दछ: ay = ă + [ɪ], ai =a+ [ɪ]। यसैले, टय / "हात" हो [टाई] जबकि वा / "कान" हो [टाई]। त्यस्तै u र o मुख्य स्वरको फरक उच्चारण संकेत गर्नुहोस्: au = ă + [ʊ], ao =a+ [ʊ].
यो चार त्रिकोण अगाडि र पछाडि अफग्लाइडहरू थप गरेर गठन गरिन्छ केन्द्रित दिफ्थongs्ग्स। यसैले समावेशित प्रतिबन्धहरूलाई डिप्थongs्ग्सएक triphthong फ्रन्ट न्यूक्लियसको साथ फ्रन्ट अफग्लाइड हुन सक्दैन (केन्द्रिक ग्लाइड पछि) र क triphthong ब्याक न्यूक्लियसको साथ ब्याक अफग्लाइड हुन सक्दैन।
अगाडि र पछाडिको सम्बन्धमा अफग्लाइडहरू [ɪ, ʊ], धेरै फोनोलोजिकल विवरणहरूले यसलाई व्यंजनको रूपमा विश्लेषण गर्दछ ग्लाइड्स /j, w/ यसैले, जस्तै एक शब्द u "कहाँ" [ɗəʊ] हुनेछ /ओउ/.
यो आवाज सर्वनाम गर्न गाह्रो छ:
भियतनामी स्वर ग्लाइड्स (स्रोत: IRD नयाँ टेक)
◊ VIETNAMESE भाषा भियतनामी र विदेशीहरूका लागि - भियतनामी टोनहरू - सेक्सन 4
◊ VIETNAMESE भाषा भियतनामी र विदेशीहरूका लागि - भियतनामी सम्वाद: अभिवादन - सेक्सन 5
(देखिएको 277 पटक, 1 आज भ्रमणमा)
पोस्ट दृश्यहरू: 123
← VIETNAMESE भाषा भियतनामी र विदेशीहरूको लागि - परिचय - सेक्सन १
VIETNAMESE भाषा भियतनामी र विदेशीहरूका लागि - भियतनामी व्यञ्जनहरू - सेक्सन3→
आजको भ्रमण: 266
अन्तिम7दिन भ्रमणहरू: 6,309
कुल भ्रमण: 78,126